Madaxwayne Dhibta Dhaqaale Ee Koowaad Ee Ina Haysataa Waa Qiimo Dhaca Shililka Somaliland Ee Maaha Sicir Bararka. W/Q Yaasiin Yuusuf | Somaliland Today
← Muuse Biixi Oo Muddo Bil Kodhaw Xilka Haya Walina Aan Dhammaystirin Xukuumadiisi.
Sanadkasta Oo Cusub Oo Dhashaa Dadwaynaha Dhib Ayuu Kusoo Kordhiyaa. →
Madaxwayne Dhibta Dhaqaale Ee Koowaad Ee Ina Haysataa Waa Qiimo Dhaca Shililka Somaliland Ee Maaha Sicir Bararka. W/Q Yaasiin Yuusuf
Dhammaan mahadi waxay u sugnaatay Allah, naxariis iyo nabadgelyana dushiisa ha ahaato nebigeenii Muxammed. Madaxweyne, waxaad ka soo saarteen shirkiinii wadatashiga wasiiradda qodobo dhowr ah oo ay ku jirto in la sameeyo guddi farsamo oo Sicir-bararka howshiisa gasha.
Madaxweyne, Waxaa inta badan laysku khaldaa labadan.
Qiimo dhaca lacagtaShilinka Somaliland ku socda.
Madaxweyne, Soomalidu waxay ku maahmaahdaa “Oodda dhacmeed sida aya u kala sareeyaan ayaa loo kala guraa”. Dhibta Sicir-bararku wuu jiraa waana inna daan-weyne, marnaba tegi maayo, ee sidii loo yareynlahaa ayaa la qabtaa, ee waxaase ka weyn oo dhaqaalaheena haysta waa “Qiima dhaca Shilinka Somaliland ku socda ”,
Madaxweyne, waxaana inoo keenay laba arimood oo midi ay
dowladu ka masuul tahay, unna baahan in si deg deg ah wax looga qabto iyo mid kale oo danni ku baday ah oo faa’iidadeeda iyo khasaaraheeda dhaqaalayahanku ku murmaan oo barkan arinkale.
Shilinkii Somaliland ee yaalay iyo kii dowladu soo daabacato oo bilaa dhigaal ah.
Somaliland oo laga wada isticmaalo lacagta adag ee Doolarka iyo Shilinka oo qiimaha sarifkiisu aanu fadhiyin (floating rate ah). Tani waxay keentay in Shilinkii isticmaalkiisii yaraado.
Madaxweyne, xalinta “ Qiima dhaca Shilinka Somaliland ku socda ” way fududahay haddii aynu raacno sida ay tahay in loo raaco.
Maxadweyne, Qiimo dhaca Shilinka Somaliland waxaa lagaga saari karaa laba arimood oo kale ah sidan.
Siyaasadan waxaa fulisa wasaaradda Maaliyadda.
Cashuurta Doolar lagu uruuriyo aad iyo aad ayey u badan tahay, taasna waxay abuurtay in mar walba la raadiyo Doolar. Markaa waxaan soo jeedin lahaa sidan;
In Cashuurta dhammaanteed lagu qaado Shilinka Somaliland oo la yareeyo inta la yareyn karo inta lagu qaado Doolar.
Waa in sida hadda jirta wax laga badalo, oo Doolar soo gala dowlada ay ku wareejiso Bangiga dhexe oo wasaaradaha iyo hayadaha madaxbanaan ee dowladu ayna sameynsan xisaabo Doolar ah.
Siyaasada waa fuliya Bangiga dhexe, waxaana jira laba siyaabood oo lacagta wadan lagu maamulo, qiimaha sarifkiisu waana sidan;
Floating Rate (Qiimaha sarifka oo aan fadhiyin)
Fixed Rate (Qiimaha sarifka oo fadhiya)
Somaliland waxaa laga isticmaalaa floating rate oo ah in aan la jaangoyn qiimaha sarifka oo loo daayo suuqa, bangiga dhexena aanu faro gelin. Siyaasaddan waxaa isticmaala wadamada dhaqaalahoodu hore u maray ee dunida koowaad ah. Ma jiro wadan soo koraaya oo isticmaala tan.
Tani, waxay keentay in sariflaayaashu sida ay doonnaan u maamulaan sarifka lacagta, oo iyada laftigeedii noqotay alaab laga baayacmushareeyo markii ay yaraatay isticmaalka Shilinka Somaliland.
Si lacagta wadanka looga dhigo mid fixed rate ah, waxaa waajiba in loo sameeyo dhigaal ku dhow xaddiga lacagta wadanka taal iyo ta lasoo daabacaayo.
Madaxweyne, masuuliyadda koowaadna adiga Madaxweyne ahaan ayey ku saarantahay oo meelmarinta xalkaa adiga ayaa lagaaga fadhiyaa.